Battery Test Equipment Manufacturers |China Battery Test Equipment Suppliers & Factory
Kugara uchigadzirisa uye bvunzo inzira "inofanira-kuve" yemabhatiri ekumira.Kuita kwakanakisa kwe8610P yekuyedza masero kuramba uye voltage ichakubatsira iwe kubvisa asina kusimba mabhatiri uye kuve nechokwadi chekuita kwavo.
Bhatiri Impdeance Tester GDBT-8612
Sechikamu chakakosha chesimba remagetsi, mabhatiri anofanirwa kuongororwa uye kuchengetedzwa gore negore, kota kana mwedzi wega wega uye data ravo rekuyedza rinoda kuongororwa nguva nenguva.
GDKH-10 Bhatiri Activator
Mune ese mashandisi ekushandisa uye anoshanda network masisitimu ane kuwedzera ruzivo uye otomatiki, isina kukanganiswa magetsi ekupa ndiyo inonyanya kukosha vimbiso.Kunyangwe iri AC kana DC isingapindiki magetsi ekupa system, bhatiri rinoshanda sesimba rekuchengetedza simba rinoita basa rakakosha musimba sosi system.
Pure sine wave AC simba rekupa
Iyo GDUP-3000 ndeye inotakurika yakachena sine wave pane-saiti AC bvunzo magetsi.Iyo inozivikanwawo se-on-saiti AC uye DC bvunzo magetsi emagetsi, AC uye DC echimbichimbi magetsi, munda bvunzo magetsi, nhare mbozha bvunzo magetsi.
AC Power Supply GPUP
Iyo GDUP-6000 (GDUP-3000) inotakurika yakachena sine wave pane-saiti AC bvunzo magetsi.Iyo inozivikanwawo se-on-saiti AC uye DC bvunzo magetsi emagetsi, AC uye DC echimbichimbi magetsi, munda bvunzo magetsi, nhare mbozha bvunzo magetsi.
Inoshandiswa zvakanyanya musimba DC system, kutonga kwemaindasitiri, kutaurirana, uye bhatiri yekuchaja michina uye yekutsvagisa kwesainzi.